एमाले स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा सुरु, के– के छन् एजेन्डा ? « Pahilo News
एमाले स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा सुरु, के– के छन् एजेन्डा ?
प्रकाशित मिति : 18 June, 2016 5:43 am
४ असार । नेकपा –एमाले) को स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ । ११ बजेवाट सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा तीन ओटा एजेण्डा रहेको कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा प्रदेश कमिटी गठन, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन, सल्लाहकार परिषद्को पूर्णतालगायतका एजेण्डा रहेका छन् । प्रदेश कमिटी गठनका सन्दर्भमा तीन ओटा विकल्पमा छलफल हुनेछ ।
गत जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले प्रदेश सङ्गठन कमिटीको गृहकार्य गरी पेस गर्न केन्द्रीय सङ्गठन विभाग र सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो । प्रदेश कमिटीमा संयोजक, पदाधिकारी वा स्थायी कमिटी सदस्य कोबाट गर्ने, सदस्यमा केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष, पूर्व जिल्ला अध्यक्ष वा क–कसलाई राख्ने भन्नेबारेमा विभागले खाका तयार गरेको बुझिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षमा कसलाई पठाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल हुने एमाले स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘एजेण्डा छैन,’ एक नेताले भने, ‘बैठकमा कुरा उठ्यो भने त्यो विषयमा पनि छलफ हुन्छ ।’
निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) निकटको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले अत्याधिक बहुमतसहित आफुलाई शक्तिशाली संठनका रुपमा उभ्याएपछि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष र ८ सदस्य सहित ११ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित भएको छ । तर, संगठन भित्रको विवादका कारण कसलाई अध्यक्ष पठाउने भन्ने विषय नै अन्योल बनेको छ । शुक्रबार आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी र सदस्य छनोट प्रक्रियामा हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएपछि झन् समस्या भएको छ । पहिलो बनेको संगठन निजामती कर्मचारी संगठनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षमा कसलाई पठाउने भन्ने बारेमा चर्को लबी सुरु भैरहेका बेला शुक्रबार बैठक बसेको थियो। त्यहि विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिले अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल र पूर्वअध्यक्ष भोला पोखरेलले अध्यक्ष दाबी गरेका छन् ।
मेलम्चीले सात घर बगायो
सिन्धुपाल्चोक, १९ साउन । मेलम्ची खोलामा आएको निरन्तरको बाढीले सोमबार राति मेलम्ची–११ का सात घर
न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाउन सत्ता गठबन्धन कार्यदलको बैठक बस्दै
काठमाडौं, १९ साउन । सत्ता गठबन्धन कार्यदलको बैठक आज (मंगलबार) पनि बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, १९ साउन । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कक्षा १२ को परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनबाट गर्न शिक्षा
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको झन्डै ५१ अर्ब जोखिममा
काठमाडौं, १९ साउन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको झन्डै ५१ अर्ब रुपैयाँ लगानी बाढीपहिरोका कारण जोखिममा